5 Izindlela Zokugcina Iintaba Zakho Ebusweni Bakho Xa Scuba Diving
Ndiye ndiphantse kwinqanaba leenwele ezinokwenzeka. Ndiyitshintshe i-hairstyle yam ubude bamagxa, ukuya kwinqumle ye-buzz, kwindlela ede, ekhethiweyo. Njengoko ndandinyusa iinwele zam ngaphandle kwe-buzz-cut, ihobe malunga naluphi na ubude beenwele. Eyona nto ibhetele xa inwele yam yayinqunywe. Okubi kakhulu xa iinwele zam zifikelele emlanjeni-ubude bomnxeba bob (akunakwenzeka ukubopha, kodwa kunzima kakhulu ukukhulula).
Ukulawula iinwele ezinde xa ukudilika kubalulekile ngezizathu ezibini.
(1) Izinwele ezinde zihamba phambi kwendawo yombono we-diver (kwaye iyakhathazeka kakhulu kwinkqubo).
(2) Izinwele ezithwalayo zihamba zijikeleze ngaphantsi kwe-mask strap, nto leyo eyenza ukuba imaski ihambe ngexesha lokudiba. Oku kunokubangela nokuba imaski efanelekile ukuvuza.
Nazi ezinye iindlela zokulawula iinwele ezinde ndiye ndazifunda emva kweminyaka yokudilika.
I-ponytail kule ndawo izakuphazamisa umgca we-mask. © istockphoto.com
I-ponytail iyakubamba iinwele zakho ngexesha lokudiba, kodwa mhlawumbi iyona isisombululo esikhulu kunazo zonke. Kukho iindlela ezimbini zokugqoka umsila we-pony xa udiza:
(1) Ukuba iinwele zakho zide ngokwaneleyo, zibeke i-ponytail yakho phezulu kwentloko yakho.
(2) Ukuba iinwele zakho zifutshane, faka i-ponytail kwi-nape yentamo yakho.
Eminye yalezi zikhundla ziya kuphepha ukuphazamisa isikhundla sakho somsila.
Andiyithandi i-ponytails xa idilika ngezizathu ezibini. Eyokuqala kukuba bathambekele ekukhutsheni ngexesha lokudiba, kubangele ukuba i-mask strap idibanise kwaye ilahlekelwe isikhundla njengoko iinwele zihamba. Ukuba i-ponytail ikhulula kwinqanaba lokuba lingabikho, i-band elastic iyalahleka kwaye ijika ibe ngamanzi. Ndiyifumana amaninzi amabhinqa enwele kwiindawo zokuhambisa.
Isizathu sesibini andiyithandi i-ponytails yokudilika kukuba zivumela iinwele zakho ukuba zidibanise. Ukuphela kokuphela kwe-ponytail kutyunyiwe (ngokukodwa kumanzi anetyuwa) kwaye i-band elastic ijwayele ukuboya kwizinwele. Izinwele ezinamandla ezinjengam, zithinteka emva kokudilika kwi-ponytail, ukuba ngamanye amaxesha ndimele ndinqumle ibhanti ye-elastic.
Izibhulu zaseFransi zigcina iinwele zeentlobo zokuhamba zihamba. © istockphoto.com
Ingqungquthela eyodwa yesiFrentshi eqala kwithsaba yentloko isebenza kakuhle ukubamba iinwele endaweni ngexesha lokuhamba. Izinwele zeenwele zidibene, kwaye banamathuba amaninzi okuza kukhululeka ngexesha lokudlula kune-ponytail. Isibhondi saseFransi sinceda ukunceda iinwele ukuba zingabikho zijikeleze kwaye ziphazamise isikhundla sesimbolo semaski. Ama-braids aseFransi ayenzela abahlukahlukeneyo ngeenwele ezilukiweyo, okanye iinwele ezinqabileyo ukuba zitshintshe ngokufanelekileyo umsila we-pony.
Impendulo yodwa yama-braids aseFransi yindawo yokudibanisa i-post-dive. Ndiya kubongoza ngamandla abantu abanamaFrentshi bayibophe iincwele zabo ukuba bahambe bebhinqa kuze kube yilapho kuboniswa. Amanzi anetyuwa abangela ukuba iintambo ezidibeneyo zebhondi zizinamathele komnye nomnye, zidale umsila okhwankqisayo xa uboyiko behlelwa phambi kokuba uhlambulule ngamanzi amanzi. Kwi-pinch, sebenzisa idodoli yesimo somgca kwisalathisi esingaphantsi se-braid, uze udibanise ngokucophelela okanye udibanise ukukhangela kwinqwelo eqala phantsi kunye no-intshi yokusebenza ngo-intshi ukuya phezulu. Sasaza i-conditioner kunye neengwele zesikwele xa uhamba.
I-Pigtails / ezimbini zeBraids
Ukwahlula izinwele zibe zimbini ezilinganayo (i-pigtails) isebenza kakuhle ngokutshiza i-scuba diving. © istockphoto.com
Enye yekhanda esebenza kakuhle ngokudilika i-pigtails. Hlaba iinwele zakho phantsi uze uzibophe kwiibini ezilinganayo. Iigcakes zigcina iinwele zeentambo ezihamba ngeenxa zonke kodwa ungayinxibeki njengento yobuFransi. Inkathalo kufuneka isathatyathwe xa idibanisa i-hair dive post.
Iinwele zakho okanye i-headcarf yakho ayiyi kubukela okulungileyo emva kokudilika. © istockphoto.com
Kwiindawo ezininzi zokudilika, izitolo zendawo zithengisa iiflekhsi zentloko zenziwe nge-scuba diving. Ezi zivalo zivame ukuba zenziwe nge-bandana-type material, kwaye zikhangeleka njengamakhanda okuguqulwa. Banobubanzi obunxibayo obuhamba phezu kwentloko ye-diver and down behind the neck of the neck, apho intambo ihlanganiswa nge-elastic ukuze ibambe ingxabano.
Ezi ntlobo zentloko zibonakala ngathi zinengcamango enkulu, kodwa andizange ndibabone basebenza. Uninzi lwabalandeli luyabakhupha emva kokudilika kweminye kuba iinqwelo zivame ukuzulazula (okanye zivaliwe) ngaphantsi kwamanzi.
IiHood yindlela endithanda ngayo yokugcina iinwele phantsi kolawulo xa i-scuba diving. © istockphoto.com
Ngendlela ephumeleleyo kakhulu endifumeneyo yokulawula iinwele xa i-scuba diving isebenzisa i-hooprene hoving hood. Izindlela ezahlukeneyo zeentambo zikhoyo, ukusuka kwi-hood-style hoods ezizibophelela ngaphantsi kweengxube ze-diver, ukuya kuma-hood apheleleyo agqubuthela intloko nentamo, kwiimvande ezithandayo (ezizithandayo) ezifanelekileyo phantsi kwe-wetsuit ye-diver. (Oku akugcini nje ukugcina iinwele ziphantsi kolawulo, zinciphisa amanzi amnandi aguqayo avuleka entanyeni ye-wetsuit.)
Iikhowudi zisebenza nazo zonke ubude beenwele. Ngezinye iintlobo ezinobungakanani obufutshane okanye obude, kunokuba kulula ukuqala ukumanya iinwele zakho ukuze uzigcine, uze udibanise i-hood phezu kwentloko yakho. Indlela elula yokwenza oku kukungena emanzini ngebhodi ephantsi entanyeni yakho, uncike emanzini ukuze unganise iinwele zakho uze uyibuyisele kwakhona, uze udibanise ngokucophelela.
Ngeenwele ezinde (ezinjengeyami), kusebenza kakuhle ukuguqula iinwele zakho ngokugqithiseleyo kwi-bun phezu kwentloko yakho. Bamba iinwele zakho endaweni kwaye uyilayishe ihood phezu kwayo. Ayikho i-hair elastic of other method of securing the hair is necessary! Ihood iya kubamba iinwele zakho endaweni.
Ihood yindlela endithanda ngayo yokugcina iinyawo zam ebusweni bam xa i-scuba diving kuba i-hood ikhusela ngokupheleleyo inwele ekuhambeni kwayo. Izinwele ze-elastics kunye nezinye iisetyenzisi aziyimfuneko xa usebenzisa i-hood, ngoko ke inwele ayinakuncipha.
Iingcebiso ezingakumbi zokuhamba ngokulula:
• Iingcebiso ezi-13 zeZiko eliLungileyo lokuTyhulwa kweBeti
• Indlela yokugcina iMask yakho esuka kwiFogging
• njani kwaye nini ukusebenzisa ii-Weight Weights
Izinyathelo ezi-6 ezithintekayo, iNtsika eLawulayo
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: iderm okanye iderm
Imithetho ye-Thermodynamics njengoko ihambelana ne-Biology
Iimpawu zeMathematika zeeves
Fumana iCluster ye-Beehive
Iisiseko zeeNkqubo zeMetric System
I-Acids Acids kunye ne-Acid Strongest Acid
Kutheni iHelium Balloons Deflate?
Funda ngeeModeli zeModeli kunye neMimoya
Iyintoni Inkqubo yeSosobari?
Isalathisi, iSilt, kunye neNdawo yokuHlalwa koMhlaba
Uluphi ulwahlulo phakathi koxinzelelo kunye nobukhulu obukhulu?
I-Biography yoMlawuli we-NRA uWayne LaPierre
Ukususela kwi-Flavian Amphitheatre ukuya eColosseum
Iibhanti ezithandekayo zaso sonke ixesha
Umgama, umlinganiselo, kunye namaxesha okusebenzela amaxesha
Gubha iLitha ngeClass Solstice Recipes
UKumkani Abdullah waseSaudi Arabia
I-Top 10 ye-Ewan McGregor Movies
Ukuhlaziywa: iBridgestone Blizzak WS70
Inkcazo ye-Militant Atheist
Ungayifaka njani iCape Cue Tip?
Ukuphungulwa kweGymnast Kerri Strug
Biography yeDesi Arnaz
Yintoni Eyenzekayo 'KwiModeli Elandelayo YaseMelika'?
Indlela yokufakela ibhola lakho leGalofu ukuya kwiGaraji leGalati
Iingoma eziphezulu ze-20 Beach Boys
Indlela yokufumana iikititi ze-US Open Golf
Iingoma zeBeatles: "Hey Jude"
Izihlalo Ngezakhiwo Eziqingqiweyo - I-Architecture Unokuhlala
Indlela Yokuphanda Inzala Yakho YaseFransi
'Utre': Ukudibanisa kwesi siLwimi esikhulu sesiFrentshi
Iingcebiso eziphambili ze-Break Shot
I-CAMPBELL - Igama lomnqophiso nomxholo